Wasiir Juxa oo Baaq u direy Beelaha ku dagaalamaya Hiiraan
MUQDISHU, Somalia - Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Somalia Mudane Cabdi Faarax Saciid "Juxa", ayaa Baaq Nabeed u diray Beelaha Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya gobolka Hiiraan.
Isagoo ka hadlayay Shir Jaraa'id oo Jimcihii ku qabtey Muqdishu, ayuu Wasiir Juxa sheegay in dagaalka socda uu yahay wax aan loo baahnayn, iyo dhiiga dad shacab ah oo si micna darro ah lagu daadinayo.
"Marka ugu horeysa waxaan ku baaqeynaa in dagaalka si deg deg loo joojiyo, aad baan uga xumahay dadka halkaasi wax ku noqday kuwa ku dhintey iyo kuwa ku dhaawacmay intaba," ayuu yiri Juxa.
Wasiirka ayaa ka codsaday Odayaasha, Culimaa'udiinka, Waxgaradka iyo Siyaasiyiinta gobolka Hiiraan inay in ay ka qeyb qaataan joojinta dagaalka iyo isku soo dhaweynta beelaha halkaasi ku dagaalamaya.
Waxa uu intaasi ku daray in Dowladda Federaalka ay diyaar u tahay inay kaalinteeda ka qaadato joojinta Colaadda ka aloosan gobolka Hiiraan, islamarkaana ay sida ugu dhaqsiyaha badan Wafdi ugu dirayso.
Dagaalka waxa uu labadii maalmood ee lasoo dhaafay uu ka socdaa inta u dhaxaysa Matabaan iyo Hees, oo dhaca xadka kala qeybiya Gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, ee bartamaha dalka Somalia.
Ra'iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa isna dhankiisa ku baaqay in Dagaalka gobolka Hiiraan, si deg deg ah lagu joojiyo, sidoo kalena wadahadal iyo waan-waan nabadeed lagu dhameeyo waxa keenay dirirta.
Dagaalka waxa uu salka ku hayaa muran ka dhashay Dhul Daaqsimeed, ay isku qabteen labo beelood oo kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud kuwaasi oo ku dhaqan Deegaanka Beenaaley.
Juxa oo codsi u direy Issimada iyo Culimada Puntland [Warbixin]
Puntland 07.10.2018. 08:03
Culimadda reer Puntland ayuu Murashax Juxa ku tar-tarsiiyey inay bilaabaan olalaha ka dhan ah...
WAREYSI: Juxa oo ku dhawaaqey musharxnimo, ka hadlay kororsiga iyo arimaha Federaalka
Puntland 25.06.2018. 09:29
Dagaal culus oo ka qarxay Koonfurta gobolka Sool
Puntland 22.10.2018. 11:36
Wasiirka Arrimaha Gudaha dowladda Federaalka Somalia oo booqday Garoonka diyaaradaha Garowe [Sawirro]
Puntland 28.06.2017. 19:53
​Wasiirka Arrimaha Gudaha Somalia oo Garowe yimid xilli uu fariin u diray shacabka Puntland [Dhagayso]
Puntland 23.06.2017. 21:41
Puntland iyo Galmudug oo heshiis kala saxiixanaya, Juxa oo goob joog ahaanaya
Puntland 21.06.2017. 08:15
Somalia: ​Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo Muqdishu ku qabatay shir ku saabsan dib u hishiisiinta
Soomaliya 13.06.2017. 12:42